बीपीले कालकोठरीबाट लेख्नुभएको चिठी - Himal Dainik
काठमाडाैं ६ श्रावण २०७७, मंगलवार १५:४६
मलाई अत्यन्त पाशविक व्यवहार गरिएको छ। मलाई सात फुट लामो र छ फुट चौडा हावा नछिर्ने अँध्यारोे कोठामा दिन–रात थुनिएको छ। मैले यसै कोठामा खाना पकाउनेसहित सबै दैनिक काम गर्नुपर्छ। मलाई सुरुको एक महिनासम्म चौबीसै घण्टा नेल र हत्कडी लगाएर साङ्लोले बाँधेर राखिएकोे थियो।
अहिले हत्कडी र साङ्लो हटाएका छन् तर, गह्रुंगो नेल भने छँदैछ। म जलमा सामान्य रासन पाउँछु। त्यसमा चारआना मूल्य पर्ने एक सेर चामलको तीनचौथाई भाग पाउँछु। पक्राउ परेको पहिलो चालीस घण्टासम्म त मलाई अलिकति नून मात्रै दिएका थिए। मलाई कुनै ओढ्ने वा आछ्याउने दिइएको थिएन। पुस महिनाका अत्यन्त ठण्डी रातहरु मैले त्यत्तिकै गुजार्नुपर्यो। मलाई उनीहरुले तेस्रोे रात एउटा राडी र धुस्सा दिए। अहिलेसम्म म त्यसैको भरमा छु।
म जहाँ थुनिएको छु, त्यो क्याप्टेन (जेलर)को घोडा–तबला हो। त्यसलाई जसोतसो मेरो जेल बनाइएको छ। यो ठाउँ अत्यन्त फोेहोेर छ। म बाहिरी विश्वबाट पूर्णरुपमा अलग्याइएको छु। मैले आफ्ना नातेदारलाई चिठी लेख्न र किताब पाउन माग राख्दै आएको छु तर, उनीहरु केही सुन्दैनन्। मेरो स्वास्थ्य अत्यन्त खराब छ। मलाई कुनै चिकित्सकले पनि परीक्षण गरेका छैनन्।
कामरेडहरु बाहिर के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा छैन। र, मैले कारबाहीको कुनै निर्देशन दिनु पनि उपयुक्त हुँदैन। म उहाँहरुलाई सबै दल र समूहहरु संयुक्त मोर्चा निर्माणका लागि एकबद्ध हुनुपर्छ भन्ने सल्लाह मात्र दिन सक्छु। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, नेपाल प्रजा पञ्चायत र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसले अवश्य पनि संयुक्त कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। अर्थात, संयुक्त कारबाही थाल्नुपर्छ।
मलाई उनीहरुले नेपाल बसाइको बेला म कहाँकहाँ बसेको थिएँ भन्ने प्रश्न सोधे। मैले कसैको नाम बताउन मानिनँ। कुनै तयारी नगरी आन्दोलन सुरु गर्नुहुँदैन भन्ने सल्लाह दिनका लागि मैले त्रिपुरबरलाई भेटेका कुरा भने स्वीकार गरेँ। जनरल विजयमार्फत महाराजलाई भेट्न खोेजेको, त्यस सम्बन्धमा उनीसँग कुरा मिलाएकोे र जनरलको जवाफ पाउनुभन्दा पहिले नै पक्राउ परेको कुरा पनि मैले बताएँ। म पक्राउ पर्दा उनीहरुले मेरो खल्तीमा मैले महाराजलाई लेखेको चिठी फेला पारे। मैले उनीहरुलाई के पनि भनेँ भने ‘एक सच्च सत्याग्रहीकोे हेसियतबाट मैले कुनै कुरा लुकाउनु छैन।’ चिठीको बेहोेरा के. एच. लालो, सान्दाजु र कृष्णप्रसादलाई थाहा छ। एक सच्चा सत्याग्रहीले सबैभन्दा पहिले प्रतिपक्षीलाई आफैँले सुध्रिने मौका दिनुपर्ने हुँदा देशको अवस्थाका विषयमा महाराजलाई व्याख्या गर्नका लागि उनीसँग भेट गर्न चाहेको कुरा मैले उनीहरुलाई बताएँ।
मेरो तात्पर्य के हो भने म पक्राउ हुनबाट भाग्न खोजेको थिइनँ। उनीहरुले मेरो साथबाट टंकप्रसादले लेखेका तीनवटा चिठी र मेरो कार्ययोजना, छ महिनाको कार्यक्रम पनि फेला पारे।
कृपया मेरो पत्नीलाई चिठीको बारेमा यथाशीघ्र जानकारी दिनुहोला। मैले लेखेका कुनै पनि कागजात आफूसँग नराख्नुहोला। यो चिठी पठाउन सम्भन नभए यसको एउटा प्रतिलिपि उतारेर पठाउनुहोला। मलाई खबर पठाउनुहोला।
१३ मार्च १९४९ (३० फागुन, २००५), काठमाडौं
(मेरा जीवन असफल भएनः संस्मरणात्मक साक्षात्कार पुस्तकबाट साभार गरिएको)
अघिल्लोनदीमा बहाव बढ्दो : नारायणी र कोशी खतरा तहमाथि
पछिल्लोआज १५० जना संक्रमित थपिए